You are here: Home somal Cayaartoyga Gobolka Sanaag Oo Si Xamaasadysan Loogusoo Dhoweeyey Ceerigaabo.
ee sida a sheegay Caddaalad-darrada lagaga reebay tartanka gobollada Somallland kaga hortageen qiyaastii 15-km galbeedka magaalada Ceerigaabo Waxana cayaartoygan dadweynahaasi usoo gelbiyeen dhinaca gudaha magaalada Ceerigabo halkaasoo shaaracyada waaweyn ee magaaladana lagu soo wareejiyey.
Intaasi kaddibna fagaaraha afar-geesoodka ceerigaabo oo soo dhoweyntan awgeed la isugu soo baxay ayaa waxa ka hadlay qaar kamid ah xidhibaannada golaha degaanka ceerigabo Tababbaraha Cayaartoyga gobolka Sanaag ee kooxdan hoggaaminayey iyo aqoonyahanka kale.
“Badhasaabka gobolka Sanaag iyo Isuduwaha cayaaraha ee gobolka oo dhallinyaradii hakan muddaharaadka selmiga ah ka samaysay ku sheegay inay yihiin dibjir iwm hadalkaas haddii ay xaal ka bixin wayaan gacan baannu wax kaga qabanaynaa”. Sidaas waxa yidhi Xidhibaan-Bashiir Faarax Dawaarre
Xidhibaan- Ibraahim Axmed-laangadhe oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa “Caddaaladdaas Haddaan dib loogu noqon wax walibana waa umaanayaan cayaartoygayaguna niyad jabi maayo”.
C/xakiin Maxamuud Xasan tababbaraha cayaartoyga Sanaag ayaa isaguna wuxu yidhi “Dadkayaga waan u sheegayaa inaan nalaka badin cayaar wanaagsanna aannu soo bandhignay Madaxweynahana waxan leeyahay cayaaraha cid garanaysa wasaaradda ha loo dhiibo”.
Aqoon-yahan Ismaacii Faarax Qalas ayaa isagana hadalladiisii waxa kamid ahaa “Ninna Dhuuni buu kuugu dhaadhacay ninna dhaqashuu kuugu dhabar jabay intii Hargeysa innaka qabatay labadaasay kala noqdeen”.